Ogaden News Agency (ONA) – Kulan ay kasoo qeybgaleen Hayado Xuquuqul Insaan, Culuma udiinka Carabta, Professaro South Afrikan ah oo lagu xusayo Xasuuqa Ogadeniya ayaa lagu qabtay Cape Town.
Kulan ay kasoo qeybgaleen Hayado Xuquuqul Insaan, Culuma udiinka Carabta, Professaro South Afrikan ah oo lagu xusayo Xasuuqa Ogadeniya ayaa lagu qabtay Cape Town.
Haayadihii Ka soo qeybgalay Kulankan:
*Culumaa-u-Diinka South Afrika
*Muslim Judicial Council
*Markiska Nuur Al Islamiya Cape Town
*Jaaliyada Liibiya oo ka hadashay Kulankan
*Jaamacada Cape Town
*Haayada Trauma Centre
Iyo Qabanqaabiyaasha Shirka oo ka hadlay Shirkan kuna baaqay Canbaareyn iyo Banaanbax ay soo wadaan. Hoos ka Aqriso Warbixinta oo dhameys Tiran:
Shir`ay Siwada jir ah u soo wada qaban qabiyeen Ururka Dhalinyarada & Ardayda Somalida Ogadenia (OYSU) iyo Jaaliyadda Somalida Ogadenia Ee South Africa (JOKA) iyo waliba Ururka iskutaga Jaaliyada Somalida South africa (SASA) ayaa waxa uu ka dhacay Magalada Cape Town gaar ahaan Xafada Somalida Ku badan tahay ee Bellville.
Shirkan oo ahaa shir horay loo sii Ogaysiiyay Dhamaan Shacabka Somaliyeed & Waliba Hay`addaha kala duwan & Saxaafada Wadanka South Africa & Culumada Muslimka ee Cape town ayaa waxa uu Shirka furmay Salaadii Casar kadib, Saacadu marka ay aheyd 5:00Pm.
Shirka waxa lagu furay, sidda caadadu aheyd Ayadaha Quraanka Kariimka iyo wacdi diini ah oo uu soo Jeediyay Sheikh Maxamed (Shilaabo). Sheeikha Ayaa waxa uu ku dheeraday wacdigii diiniga ahaa isagoo ka hadlay Halganka iyo waliba Qofka Muslimka ah waajibaadka ka Saaran Shacabkiisa & Diintiisa iyo waliba Dhulkiisa hooyo oo diinta ina fartay in hadii lagu soo duulo uu cadawga gacanta kula dagalamo, haduu awoodi waayana Afka kala dagaalamo haduu taas awoodi wayana uu uurka ka naco Gaalada gumaysanayso.
Sheikh Maxamed Marka uu dhamayay Wacdigisii waxa loo gudbay Ajandihii shirka oo dad ku ay wada sugayeen. Waxaa shirka daadihinayay Maxamed Aaden oo ah xoghayayaha SASA. Waxa uu makarafoonka ku soo dhaweeyay, Xoghayaga OYSU ee Magalada Cape town Mudane Maxamed Qani, oo ka soo jediyay madasha qudbad uu soo diyaarsaday kuna Baxaysay Luuqada English ka ah madama ay dad ka u badnaayeen Dad Ajanabi ah. Qudbadiisa waxa ay ku sabsanayd -Maalinta Xasuuqa Ogadenia “Massacre Day” oo Dacalada Aduunka oo dhan laga xusayay Bishan 18 keedii laakiinse reer Cape town dib u dhigeen oo ay u qoondeeyeen si ay saxaafada iyo dad badan oo arimaha Ogadenia u dhuun duleelo uga soo qayb galaan.
Waxa uu Mudanaha ka soo sheekeeyay Xasuuqii 1994 bilowday oo loo gaystay Hogaamiyaashii, Caaqiliintii, Ugaasyadii, & waliba Suldamada & waliba Gumaadka ilaa hada ka socdo Ogadenia, haba ugu danbayso Gumaadkii 12 Kii bishan Ka bilowday gudaha Ogadenia gaar ahaan Gunagado oo Dad shacab ah oo garayo 32 Qof oo BIRIMAGAYDA ah Lagu xasuuqay Magaladaas Gunagado.
Waxa laga daaray goobta Cajal ka hadlayo Tacadiyada iyo Dhibka Ogadenia ka jiro, oo dhamaan Somalida dawanaysay Filimka oo ka hadlayay dhibka iyo xasuuqa ka socdo Ogadenia ay indhahooda ka muuqatay murugo aad u badan qaarna waxa aad arkaysay indhahooda oo wada ilmaynaya haba ugu darnadeene dad-ka Ajanabiga ah oo aad u malaynayso in ay dadka Somalida ah ka uur jilicsanayeen madama ay tahay markii ugu horaysay ay filin nocan oo kale ah ka daawadan.
Waxa Makarafoonka Lagu soo dhaweyay Gudoomiyaha Ururka Sharciga Muslim Judicial Council (MJC) Sheikh Shucayb. Hadalkiisa waxa uu ku bilabay; ” Asc Dhamaan tiin waad salaamantihiin Somalida Reer Ogadenia. Waxaan aad uga xumahay shacabka Somalida Reer Ogadenia oo sidan loo gumadayo aduunkana Indhaha ka haysto. Muslimiintiina ay ku firsanayaan walalahooda Muslimka ah oo Dhulkooda & Diintooda & dad koodaba la haysto.” Isagoo sii wata ayuu yidhi sheekha; “Marka kobaada ayuu dhahay sheekhu Waxa aan u Tacsidaynayaa Dhamaan Shacabka Somalida reer Ogadenia Xasuuqii ugu danbayay ee loogaystay Shacab aan wax galabsan. Samir iyo iimana Allaha hanaga siyo ayagaana Janadii Fardowso allaha haka waraabiyo.
Sheikh Shucayb waxa uu si xanaaq ah uga hadlay culumada Somaliyeed ee wadankan xorta ah ee South Africa ku nool Kana soo jeedo Wadankaas Gumaysiga uu hagraday in ay yihiin kuwa iska aamusan. Wuxuu yidhi; “Culumada miyeey cabsonayaan mise Aqli la aan ayaa u gaysay. Aniga waan garan la ahay. Maxaa yeelay mar walba waxa ay u doodaan Falastiin oo ay ka hadlaan kuna soo qataan Qudba waliboo Jimca ah. Miyeey san haboonayn in ay ku soo qataan Dilka, Dhaca, Kufsiga iyo Waliba Boobka loo Gaysanayo Shacabka uu ka soo jeedo ee Somalida Ogadenia? Arintan wa arin i gubayso waxaaanan idin leeyahay halgankiina & Aduunka wax u sheegidiisa haka daaline waa in ad wadaan inta dhulkiina aad ka xoraysanaysaan.” Wuxuu yidhi Sheekh Shucayb; “Waxa an la yaabanahay Afrikaan afrikaan gumaysanayo.” Hadalkiisii ayuu sheikha ku soo gaba gabeyay; “Wax walba oo aad nooga bahataan hadanahay (MJC) Hiil & hooba waad naga halaysaan wana idin garab taganahay hadaad tihiin shacabka Somalida Ogadenia.”
Ka dib waxa lagu soo dhaweyay Sheekh Maxamed Hilaal oo ka socday, Markiska Nuur Al-Islamiyaha Ee Magalada Cape Town, markaskan oo ay dhistay Bulshada Masarida ah Ee ku Dhaqan Magalada Cape town. Aad ayuu uga mahad Caliyay sheekh Hilaal Shirka lagu casuumay waxa uuna sheikh u Tacsiyadeeyay Dhamaan Shacabka Somalida Ogadenia. Sheikha Ayaa hadaladiisa ka mid ahayeen; “Aniga Ogadenia Taariikh ahaan iyo xaladeeda waa mid aan ka war hayo dhul ahana aan aad u qaano. Waa dad ilaa Sayid Maxamed Cabdula Xasan halganka ka socda uu Shacabkas Somalida Ogadenia wado, hadafkooduna yahay In ay Gumaysigaas ka xoroobaan, ayahoodana shacabkaas uu ka tashado.” Sheikh oo hadalkiisa uu dheeraa ayaa waxa uu hadalkisii ku soo gaba gabayay; “Far Kalia Fool ma dhaqdo. Hadii aad is wada raacdaan Dhulkiina qof haysan karo malahan ee gacmaha is wada qabsado oo hadafkina u midooba ..”.
Martida ka soo qayb gashay shirka oo aad u fara badnaa qof walbana mawduuc uu soo Diyaarsaday ayaa waxa lagu soo dhawayay Dr Saadiq oo ka socday Jaliyada Liibiya oo u mahad caliyay Casuumada shirkan lagu casuumay waxa uuna warkiisa ku bilabay; “Is adoonsi wuu dhamaday, Kacdoonka ka socdo wadamada muslimka ah waad u jedaan shacabkanagii Qadafi uu gumadi jiray maanta waad u jedaan in Qadafi u danbaysay silic iyo waliba in maydkiisa dhulka lagu jiido, marka shacabka somalida Ogadenia waxa aan leyahay hadafkiina ha ka daalina wad ka guulaysanaysaan dhamaantiin Gumaysiga madoow iinsha allaah. Waxa ana idin leyahay fikir iyo wixii aad noga bahataan waan idinla garab taganahay ..”.
Waxaa Gabagabadii Shirka Lagu soo dhaweyay Dr Cameroon Petor oo Jamacada Cape town wax ka dhiga. Dr Cameroon waxa uu hadalkisii ku bilabay; “Meshaan uma imaan in an wax ka soo jediyo ee wax aan u imaday in an murugadan idin la qaybsado Maadama aad tihiin dad Dhibaataysan, dhibanayaal kalana ka turjimaayo. Waxaan idin shegayaa gumaysi wax ka xun oo uu qof ku nolado in uusan jirin. Aniga Hooyaday waxa ay ka mid aheyd dad kii u olalaynayay xornimada South Africa. Aniga oo yar ayaan xasuustaa, maantana wad u jedaan wadankan South Africa Xornimada iyo Dimiquaradiyada uu ku nool yahay, iyo shacuubta kala gadisan ee ku nool South Africa. Waxa an leeyahay shacabka somalida Ogadenia ee South Africa ku noloow Wadan Xor ah ayaad jogtaan kuna dadaala sida aad Tacadiyadiina u gudbisan lahaydeen mar walba wixii aad noaga bahataana waan idinla garab taganahay Irid walbana waan idinla garacayaa. Waxaan ahay shaqsi Dhibana ahaa hadana waxaad tihiin dhibanayaal. Waxaan dareemi karaa dhib ka idin haysto, marka ha ka dalinina hadafkiina iyo Ujeedadiina.”
Waxaa lagu soo dhawayay Asma Ahmed oo ah Gabadh ka socoto Hay’adda Trauma Centre oo ah Hay’adda Xaquuqul Insanka u dooda waxa ayna ka codsatay shacabka somalida Reer Ogadenia haday jiraan dad wadankii ku soo wax yeeloobay damirkooduna uu fiicnayn in ay noo keenan si aan dad kaas wax ugu qabano. Waxa ay dhahday; “shaqadana ayaa waxay tahay in dadka ay Silciyeen gumaystayasha maskaxdooduna aysan wanagnayn in aan wax u qabno. Waxaan lenahay xarumo la geyo shaqsigaas laguna xanaaneeyo ilaa inta ay ka soo labanayso maskaxdiisa iyo waliba garashadiisa.”
Waxa shirka ayagana ka hadlay Sadax Urur oo Somali ah uguna horayso Somali Association of South Africa (SASA) & waliab Somali Relief Aid Agency iyo Somali Community Board oo dhamaantoodba Si wada jir ah u Canbaarayay Dowlada Ethiopa Gumaadka ay ka wado Dhulka Somalida Ogadenia .
Shirka gabagabadiisi ayaa waxa Lagu soo dhaweyay Hogaanka Warfaafinta OYSU Cabdijamaal Cabdulaahi oo bulshada ka soo qayb gashay ee meshaas jogay iyo warbaahintaba u sheegay In ay Qaban doonaan Bisha April ee soo socota Banaanbax ay soo qaban qabinayso Jaaliyada Somalida Ogadenia iyo Waliba Ururka Dhalinyarada Somalida Ogadenia (OYSU) oo is kaashanaya. Banaan baxaas oo lagu canbaaraynayo Gumaadka ka socdo Ogadenia Dunidana ay ku fiirsanayso. Wuxuuna ka dhici doonaa guud ahaan Wadanka South Africa. Wuxuu yidhi Cabijamaal; “Waxaan ka codsanaynaa dhamaan shacabka Somaliyeed ee ku nool South Africa & waliba Musliminta iyo waliba hayàdaha iyo shacabka aan saaxiibada nahay eek u nool wadanka south Africa in ay nagala soo qayb galaan anaga oo u sheegi doono waqtiga iyo maalinta uu dhici doono shirka ka hor muda dhan 20 bari”.
Shirka aya waxa uu ku soo gaba gaboobay jawi aad u wanagsan